Vakawanda Vanoti Nzendo dzaVaMnangagwa Hadzina Pundutso Inooneka
Kugara vachienda kunze kwenyika kwemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, kwave kukonzera mutauro vamwe vachiti hapana chinobatika chiri kuwanikwa nenyika kubva munzendo idzi.
Munyori mukuru weWomen’s Committee muZimbabwe Congress of Trade Unions, Amai Barbara Tanyanyiwa, vanoti vanobvuma kuti kubva pavakagadzwa kuve mutungumiri wenyika muna Mbudzi gore rakapera, VaMnangagwa vaedza chose kugadzirisa hupfumi hwenyika.
Amai Tanyanyiwa vanoti kunyange hazvo vachibvumawo kuti zvinogona kutora nguva kuti nyika iwane pundutso kubva muzvibvumirano zviri kunzi zviri kunyoreranwa pasi naVaMnangagwa nedzimwe nyika, vanoshushikana nenyaya yekuti kufamba kwaVaMnangagwa kwanyanya pasina zvakuri kuchinja muhupenyu hweveruzhinji.
Amai Tanyanyiwa vanoti dambudziko guru rakatarisana naVaMnangagwa nehururmende yavo yeZanu PF nderekuti vakapinda pahutungamiri nekupidigura hurumende uye hapana vekunze vakawanda vanovimba kuti vari kurevesa pamashoko avo avari kugara vachitaura ekukwezva vemabhizimisi vekunze.
Imwe nyanzvi inodzidzisa zvidzidzo zvebudiriro pachimwe chikororo chepamusoro soro, VaDidmus Dewa, vanobvumiranawo nenyaya yekuti dambudziko guru riri kuita kuti kumhanya mhanya kose kwaVaMnangagwa kushaye basa, inyaya yekuti vakawanda havana chivimbo chekuti ivo vakasiyana nehutongi hwaiitwa nevaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
Mutapi wenhau anoshanda akzvimirira ega, Muzvare Thelma Chikwanha, anoti kufamba kwaVaMnangagwa hakuchina kunyanya kusiyana nekwaVaMugabe achitiwo kufamba uku kunopedza mari yenyika yagara iri shoma.
VaTyanai Masiya avo vanodzidzisa paUniversity of Pretoria kuSouth Africa vanoti maonero avo ndeekuti VaMnangagwa vari kuda kushandisa mukana wekutambirwa kwavakaita pakugadzwa kuve mutungamiri wenyika mukuvaka hushamwari nenyika dzepasi rose.
Asi vanotiwo kufamba kwaVaMnangangwa hakuchina kusiyana nekwaiitwa naVaMugabe uye hakunawo chakuri kubatsira nyika.
Mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland, VaReginald Shoko, vanoti sezvo pane nhoroondo yehushamwari pakati peZimbabwe neChina pane zvinobatsira nyika zvinogona kubuda parwendo urwu.
Asi vanotiwo rwendo urwu runofanirwawo kuwonekwa senzira yaVaMnangagwa yekuedza kutsvagira ivo nebato ravo rutsigiro sezvo nyika yakatarisana nesarudzo.
Mapepanhau ehurumende anoti parwendo rwaVaMnangagwa kuChina pane zvibvumirano zvakakosha mazana emamiriyoni emadhora zvakanyoreranwa pasi pakati peZimbabwe neChina.